Mutariri Akatendeka Anofanira Kugara Akagadzirira | Upenyu hwaJesu
Mutariri Akatendeka Anofanira Kugara Akagadzirira
JESU AKAUYA KUZOKONZERA KUPESANA
Jesu atsanangura kuti panongova ‘neboka duku’ revanhu vachapinda muUmambo hwekumatenga. (Ruka 12:32) Asi vanowana mubayiro iwoyo wakanaka vanofanira kuukoshesa zvikuru. Jesu anotozoenderera mberi achitsanangura kuti zvakakosha zvikuru kuti munhu arambe akarinda kana achida kuva muUmambo ihwohwo.
Saka Jesu anoyambira vadzidzi vake kuti vagare vakagadzirira kudzoka kwake. Anoti: “Zviuno zvenyu ngazvive zvakasungwa uye marambi enyu achibvira, uye imi itai sevarume vakamirira tenzi wavo paanodzoka achibva kumuchato, kuti paanosvika achigogodza vabve vamuvhurira. Vanofara varanda vaya vanoti kana tenzi achisvika anovawana vakarinda!”—Ruka 12:35-37.
Vadzidzi vanonyatsonzwisisa zviri kurehwa naJesu mumufananidzo wake. Varanda vaari kutaura vakamirira uye vakagadzirira kudzoka kwatenzi wavo. Jesu anotsanangura kuti: “Zvino kana akasvika [tenzi wacho] pakurinda kwechipiri [kubva kuma9 dzeusiku kusvika pakati peusiku], kunyange kwechitatu [kubva pakati peusiku kusvikira na3 dzemangwanani], akavawana vakadaro, ivo vanofara!”—Ruka 12:38.
Apa Jesu haasi kungopawo mazano ekuti varanda vanofanira kushanda nesimba. Izvi zvinobuda pachena paanotaura nezvake seMwanakomana wemunhu mumufananidzo wacho. Anoudza vadzidzi vake kuti: “Nemiwo, rambai makagadzirira, nokuti Mwanakomana womunhu anouya paawa yamusingafungidziri.” (Ruka 12:40) Saka Jesu achauya pane imwe nguva mune ramangwana. Ari kuda kuti vateveri vake varambe vakagadzirira, kunyanyanyanya vaya ‘veboka duku.’
Petro ari kuda kunyatsonzwisisa zviri kurehwa naJesu, saka anobvunza kuti: “Ishe, muri kutaura mufananidzo uyu kwatiri here kana kune vamwe vose?” Jesu anopindura mubvunzo waPetro nekutaura mufananidzo wakada kufanana newaambotaura achiti: “Chokwadi ndiani mutariri akatendeka, akangwara, achagadzwa natenzi wake paboka revashandi vake kuti arambe achivapa mugove wavo wezvokudya panguva yakakodzera? Anofara muranda iyeye, kana tenzi wake akamuwana achiita saizvozvo paanosvika! Chokwadi ndinokuudzai kuti, Iye achamugadza pazvinhu zvake zvose.”—Ruka 12:41-44.
Mumufananidzo waanga atanga kutaura, zvabuda pachena kuti “tenzi” ndiJesu, Mwanakomana wemunhu. Saka “mutariri akatendeka” anomiririra vamwe varume vari ‘muboka duku’ revanhu vachapiwa Umambo. (Ruka 12:32) Pano Jesu ari kutaura kuti vamwe vari muboka duku vachange vachipa “boka revashandi vake . . . mugove wavo wezvokudya panguva yakakodzera.” Saka Petro nevamwe vadzidzi avo vari kudzidziswa nekupiwa zvokudya zvekunamata naJesu vanogona kutoona kuti mune ramangwana, pachasvika nguva yekuti Mwanakomana wemunhu achauya. Uye panguva iyoyo, pachange paine urongwa hwekuti vateveri vaJesu, avo vanova ndivo “boka revashandi” vaTenzi, vawane zvokudya zvinosimbisa pakunamata.
Jesu anosimbisazve pfungwa yekuti vadzidzi vake vanofanira kugara vakagadzirira uye kuti vasavarairwa. Vanofanira kungwarira nekuti zviri nyore kuti munhu asave nehanya kuti nguva yafamba opedzisira ava kutoshora hama dzake sezvinobudiswa mumashoko aJesu okuti: “Asi kana muranda iyeye akangoti mumwoyo make, ‘Tenzi wangu anonoka kuuya,’ akatanga kurova vashandirume nevashandikadzi, uye kudya nokunwa nokudhakwa, tenzi womuranda iyeye achauya pazuva raasingamutarisiri uye paawa yaasingazivi, uye achamuranga zvakaoma kwazvo, omupa mugove pamwe chete nevasina kutendeka.”—Ruka 12:45, 46.
Jesu anotaura kuti akauya “kuzobatidza moto panyika.” Uye ndizvo zvaaitawo zvechokwadi pakuti akatanga nyaya dzamutsa miromo yakawanda izvo zvaita kuti dzidziso netsika dzenhema zvifumurwe. Izvi zvinoita kuti vanhu vanotarisirwa kuti vabatane vapesane, “baba nomwanakomana, mwanakomana nababa, amai nomwanasikana uye mwanasikana naamai vake, vamwene nomuroora wavo uye muroora navamwene vake.”—Ruka 12:49, 53.
Mashoko aya anga akanangana nevadzidzi vake. Asi zvino Jesu anotanga kutaura neruzhinji rwuripo. Vakawanda varipo vakarambisisa uchapupu hwekuti Jesu ndiye Mesiya, saka anovaudza kuti: “Pamunoona gore richisimuka kumativi okumavirira, munobva mati, ‘Dutu riri kuuya,’ uye zvinoitika saizvozvo. Pamunoona kuti mhepo yokumaodzanyemba iri kuvhuvhuta, munoti, ‘Kuchapisa kwazvo,’ uye zvinoitika. Vanyengeri, munoziva kuongorora zvinenge zvakaita nyika nedenga, asi sei musingazivi kuongorora nguva ino chaiyo?” (Ruka 12:54-56) Zvechokwadi havasati vagadzirira kuuya kwaKristu.
“Tenzi” uye “mutariri akatendeka” ndivanaani?
Chii chinoita kuti vadzidzi vaone kuti mune ramangwana pachava nemutariri akatendeka, uye achaita basa rei?
Nei zano raJesu rekuti “rambai makagadzirira” richikosha zvikuru?
Chinangwa Chokudzoka KwaKristu Ndechei?
Chinangwa chokudzoka kwaKristu ndechei? Achadzoka sei uye zvii zvaachaita?